နောက်ခံများက Ultra HD 4K | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ » နောက်ခံများက Ultra HD 4K
နောက်ခံများက Ultra HD 4K APK ကို
အခမဲ့နောက်ခံများ (Ultra HD Wallpaper နှင့်နေ့စဉ်နောက်ခံများ) HD ကိုနောက်ခံပုံများ | အားလုံးနောက်ခံပုံများ update ကို (Ultra HD UHD) အအေးနှင့်နေ့စဉ်။ ခေတ်မှီဖြစ်ကြောင်းရှာရန်အမျိုးအစား (စူပါဟီးရိုးနောက်ခံပုံများ | သဘာဝနောက်ခံပုံများ) နှင့်ပိုပြီး ...
◼ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကဒီအဆက်မပြတ် updated app ကိုနှင့်အတူစတင်ပါ။ အခမဲ့နောက်ခံများ app ကိုအမြဲသင်တို့အဘို့အထူးနောက်ခံပုံများရှိပါတယ် ...
◼ ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်အမြင်အာရုံခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသူတွေကိုပြင်ဆင်လော့။ ထိုကဲ့သို့သောအရောင်အသွေးစုံသော, အမှောင်နောက်ခံများ, Cool, ပစ္စည်းဒီဇိုင်း, နည်းပညာ, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အနည်းဆုံးနောက်ခံများအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားနောက်ခံများ (UHD | က Ultra HD) အားလုံးအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
HD နဲ့ Ultra HD နောက်ခံပုံ app ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ:
🚩 နံရံကပ်စက္ကူသို့မဟုတ်ဝေမျှမယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ: သငျသညျအမှောင်နောက်ခံများ, Abstract နောက်ခံများ, သဘာဝနောက်ခံများ, ပန်းပွင့်နောက်ခံများစသည်တို့ကိုတူသောအကောင်းဆုံးအမျိုးအစားမှသင်၏နောက်ခံပုံများသတ်မှတ်နိုင်သည်ပြီးတော့သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ HD ကိုအရည်အသွေးကိုနောက်ခံပုံများမျှဝေနိုင်ပါသည်။
🚩 သွားလာခြင်း: နောက်ခံပုံခွဲဝေမှုကွန်ယက်တွင်သင်သည် join ။ သင်တစ်ဦးက high-quality resolution ကိုရှိပါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများ Upload လုပ်ပါ, သူတို့ကလျင်မြန်စွာလက်ခံခဲ့သည်လိမ့်မည်။
🚩 အနှစ်သက်ဆုံး: တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာအပေါငျးတို့သက high-resolution ကိုနောက်ခံနှင့်နောက်ခံပုံများစုဆောင်းပါ။
🚩 အခမဲ့: အခမဲ့နောက်ခံပုံများနေ့စဉ်နေ့တိုင်း (Daily သတင်းစာနယူးနောက်ခံများ) ကိုရယူပါ။
????ဒါဟာ 5000 + UHD နောက်ခံပုံများနှင့်အကောင်းဆုံးနောက်ခံထက်ပိုရှိပါတယ်
???? လူကြိုက်များအရောင်, အမျိုးအစားနှင့်များ Tags:
သင်နေ့တိုင်းသက်တမ်းတိုးဖြစ်ကြောင်း collection များကိုထဲမှာရှာနေတာကိုရှာဖွေအောက်ပါအမျိုးအစားနှင့် tags များနှင့်အတူရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်များနောက်ခံပုံများကဏ္ဍ,
စိတ္တဇ, တိရစ္ဆာန်များ, AMOLED, အယ်, နာမည်ကြီးတွေ, Fantasy, လေယာဉ်, လေယာဉ်, Bokeh, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, ကားများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်, သဘာဝတရား, အခင်းအကျင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာ, ဥပမာ, အာကာသ, က Galaxy, ဗိသုကာ, စီးတီး, ရိုးရှင်းသော, ရေယာဉ်, သင်္ဘော, Music macro, Hi-Tech မှ, မတ်ေတာသညျ, သမုဒ်ဒရာ, ခရစ္စမတ်, ပင်လယ်, ပန်းပွင့်, ပစ္စည်းဒီဇိုင်း, အစားအစာ, အချိုရည်, ဓါတ်ပုံပညာ, superhero နောက်ခံများ | နောက်ခံအခမဲ့ Wallpaper ...
🌱 optimization: အများအပြားအမှတ်တံဆိပ် 2160 × 3840, 1440 × 2560, 1080 × 1920, 720 × 1280, 540 ×များအတွက်အထွေထွေမိုဘိုင်း, Vestel Xiaomi သည်, Lenovo က, Huawei က Samsung, Oneplus, Asus က, LG က HTC, Meizu, Sony နဲ့ Android device ကိုဝေါလ်ပေပါလျှောက်လွှာ 960, 480 × 800 pixel အတိုင်းအတာအတွက် Pre-optimized ။
⚠️ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဒီ app ထဲမှာအားလုံးသည်နောက်ခံပုံဘုံဖန်တီးမှုလိုင်စင်အောက်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကြွေးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များမှတတ်၏။ ဤရွေ့ကားပုံတွေကိုအလားအလာပိုင်ရှင်များ၏မဆိုအားဖြင့်ထောက်ခံကြသည်မဟုတ်, နှင့်ရုပ်တုဆင်းတုဗေဒရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုကြသည်။ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုရည်ရွယ်သည်, ရုပ်တုဆင်းတု / အမှတ်တံဆိပ် / အမည်များကိုဂုဏ်ပြုပါလိမ့်မည်များထဲမှဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုကိုမရှိပါ။
ဒီ app လိုဂိုပြောင်းလဲမှု။
4K နောက်ခံများ - ...